war - Synonyms of war | Antonyms of war | Definition of war | Example of war | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for war
Top 30 analogous words or synonyms for war
စစ်ပွဲအမျိုးအစားများ - Conventional War သမာရိုးကျ စစ်ပွဲ
စစ်ပွဲအမျိုးအစားများ - Counter-guerrilla War တန်ပြန်ပြောက်ကျားစစ်
စစ်ပွဲအမျိုးအစားများ - Guerrilla War ပြောက်ကျားစစ်
စစ်ပွဲအမျိုးအစားများ - Civil War ပြည်တွင်းစစ်
စစ်ပွဲအမျိုးအစားများ - Unconventional War သမာရိုးကျ မဟုတ်သော စစ်ပွဲ
ကူကီးလူမျိုးတို့၏ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် တော်လှန်ရေး Anglo-Kuki War (or) The Kuki Rising (1917-19)
ကူကီးလူမျိုးတို့၏ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် တော်လှန်ရေး ကူကီးလူမျိုးတို့သည် မိမိတို့၏ ဘိုးဘွားပိုင်နယ်မြေများကို ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ရန်ပြုလာသော နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်တို့၏ ကျူးကျော်မှုများကို အကြိမ်ကြိမ် ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့ကြရာ ပထမကမာ္ဘစစ်အတွင်း ဖြစ် ပွားခဲ့သော Anglo-Kuki War (အင်္ဂလိပ်-ကူကီးစစ်ပွဲ ၁၉၁၇-၁၉) မှာ အကြီးကျယ်အပြင်းထန်ဆုံးသော စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း Anglo-Kuki War (အင်္ဂလိပ်-ကူကီးစစ်ပွဲ ၁၉၁၇-၁၉) သည် အာရှတစ်ခွင်၌ ဗြိ တိသျှနယ်ချဲ့တို့၏ ကျူးကျော်မှုများကို ခုခံတော်လှန်ခဲ့ကြသည့် အကြီးကျယ်ဆုံးနှင့် အပြင်းထန်ဆုံးသော သမိုင်းဝင်စစ်ပွဲကြီးများအနက် တခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုသမိုင်း၊ အပိုင်း-၂ (War, Woman And Wine)ခေါ် စစ်၊ မိန်းမနှင့် အရက်ကိုသာ ဦးစားပေးလာကြရာ ကျေးလက်လူထုမှာ ကေအင်န်ဒီအိုတို့ နှိပ်စက်သမျှ ခံကြရတော့၏။
ဗွီ-၂ ဒုံးပျံ With the war all but lost, regardless of the factory output of conventional weapons, the Nazis resorted to V-weapons asatenuous last hope to influence the war militarily (hence Antwerp as V-2 target), as an extension of their desire to "punish" their foes and most importantly to give hope to their supporters with their miracle weapon. The V-2 had no effect on the outcome of the war, but its value, despite its overall ineffectiveness, was in its novelty asaweapon which set the stage for the next 50 years of ballistic military rocketry, culminating with ICBMs during the Cold War and modern space exploration.
စစ်ပွဲအမျိုးအစားများ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်သောလက်နက်များ၊ နျူကလီးယားကလက်နက်၊ ဓာတုလက်နက် နှင့် ဇီဝလက်နက်များကို တိုက်ပွဲတွင် အသုံးပြုသည်။ အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့၊ မီးလောင်ဗုံးစသည့် သမာရိုးကျ စစ်ပွဲတွင် အသုံးမပြုသော လက်နက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်သောစစ်ပွဲကို Unconventional War ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။